Manni Murtii Obbo Jawaar Mohammad dabalatee hidhamtoota siyaasaa sadiirraa mirga Abukaatoo dhaabsifachuu sarbe. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsManni Murtii Obbo Jawaar Mohammad dabalatee hidhamtoota siyaasaa sadiirraa mirga Abukaatoo dhaabsifachuu sarbe.
Manni Murtii Obbo Jawaar Mohammad dabalatee hidhamtoota siyaasaa sadiirraa mirga Abukaatoo dhaabsifachuu sarbe.
Manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa olmaa guyyaa har’aa ooleen galmee himannoo Abbaan Alangaa Obbo Jawaar Mohammadfaa irratti bane yoo ilaalu, sababa Obbo Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaafi Haamzaa Booranaa mana murtiitti hin dhihaannu jechuun didabiif jecha, amma qaamaan hin dhihaannetti mirga Abukaatoo dhaabbachuu akka isaan hin qabne jala murtii kennuun, gareen abukaatotaa waa’ee isaanii akka hin dubbanne dhorguusaa abukaatoofi Gorsaan seeraa Obbo Misgaanuu Mullataa OMN-tti himan.
Manni murtichaa beellama yeroo dheeraa booda guyyaa har’aa akkaataa dhihaannaa ragaa Abbaa Alangee ilaalchisee deebii garee Abukaatoo dhaga’uuf taa’us, olmaa har’aatiin deebiin dhaggeeffatamu kan himatamtoota dhaddacharratti dhihaatan qofaadha jechuun deebii himatantoota dhaddacharraa of ittisanii akka hin dhaggeeffanne ibse.
Obbo Misgaanuun akka jedhanitti, akkaataa dhihaannaa ragaalee ilaalchisee Abbaan alangaa ragaan golgaa duubatti naaf haa dhihaatu jedhee gaafachuusaaf sababa mana murtichaaf dhiheeffatus, gareen abukaatoofi himatamtoonni deebii dhimma kanarratti qaban barreeffamaan dhiheessuuf qophiirra osoo jiranii manni murtichaa beellama dabarsee ture.
Ergasii boodas himatamtoota keessaa namoonni afur dhaddacharratti dhihaachuu hin feenu jechuun kan iyyatan yoo ta’u, beellamoota itti aananiin dhimmi adeemsa dhihaannaa ragaaf murtii kennuu hafee, dhimmi jaroota dhaddacharraa of ittisuusaanii ilaalamaa tureera.
Dhaddacha Adoolessa 21, 2013 ta’ameenis manni murtichaa iyyata himatamtoota afurii erga ilaalee booda, mirga dhaddachatti dhihaachuu dhabuu isaaniif raggaasisuun, akkaataa dhihaannaa ragaarratti deebii himatamtootaa ilaaluuf beellama har’atti bulfatee ture.
Beellama har’aa irrattis, sababa ragaan golgaa duubatti dhihaachuu hin qabneef ilaalchisuun deebii abukaatotni barreeffamaan dhiheessan irratti mallattoo himatamtootaa jiru keessatti, mallattoon Obbo Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa fi Haamzaa Booranaa sababa jiruuf manni murtichaa deebicha akka hin ilaalle yookaan hin fudhanne jala murtii kennuusaa Obbo Misgaanuu OMN-tti himaniiru.
Akkaataa dhihaannaa ragaa ilaalchisee manni murtichaa jala murtii kennuuf beellama qabatus, deebiin ilaalamu kan Abbaa Alangaa qofadha jechuun, mirga Abukaatoo dhaabbachuu kan qabu himatamtoota sanneen keessaas warra mana murtiitti dhihaatan qofa akka ta’e jala murtiin kennamuusaa Obbo Misgaanuu Mullataa himaniiru.
Manni murtichaa galmee erga sakatta’ee booda, dhimma dhihaannaa ragaa irratti jala murtii kennuuf Hagayya 14, 2013ttti beellama bulfateera.
Obbo Jawaar Mohammadfaa mirga Abukaatoo dhaabbachuu dhorkamuu isaanii ilaalchise, adeemsi itti aanu maal akka ta’uu qabu fuulduratti ni beeksifna kan jedhan Obbo Misgaanuun ammatti manni murtichaa mirga Abukaatoon dubbachuufii kan irraa mulqe Obbo Jawaar, Obbo Baqqalaa, Obbo Dajaneefi Obbo Haamzaa qofa akka ta’e OMN odeeffateera.
Via: Oromia Media Network
Abukaatoo: Manni Murtii Fedeeraala Itiyoophiyaa Har’atti Himatamtoota
Abukaatoo: Manni Murtii Fedeeraala Itiyoophiyaa Har’atti Himatamtoota Beellame yeroo isaan achi gahan cufaadha Abbaan Alangaas…
Mohammed Deksisoo manni murtii bilisa godheera, waan itti aanu walumaan ilaalla, akkuma duraa Poolisiin bilxiginnaa…
Obbo Baqqalaa Garbaa Mirga Wabii Dhorkaman WAASHINGITAN, DIISII — (VOA Afaan Oromoo) -- Obbo Baqqalaa Garbaa…
Tigray defense forces eviscerate ENDF:- Military and Foreign Affairs Network